Fanadinam-panjakana :: Ratsy ny vokatry ny bakalôrea fihodinana faharoa • AoRaha
Fanadinam-panjakana Ratsy ny vokatry ny bakalôrea fihodinana faharoa
Tena ratsy. Ambany dia ambany ny taham-pahafahana bakalôrea andiany faharoa teto Antananarivo, araka ny fanazavan’ireo mpampianatra nandray anjara tamin’ny fanapahana ny naoty farany ambany tamin’io fanadinana io, teny Ankatso, omaly.
“Tena ratsy ny vokatra. Manodidina ny 18% ny taham-pahafahana. Efa hita taratra tamin’ny fitsarana ny taratasim-panadinana ihany anefa io toetoetry ny vokatra io. Hatramin’izay nisian’ny fihodinana faharoa rahateo dia tsy mihoatra ny salan’isa tamin’ny fihodinana voalohany ny vokatra”, hoy ny mpampianatra taranja kajy iray teny an-toerana.
Anisan’ny nahatalanjona an’ireo mpampianatra ihany koa ny fahavitsian’ireo nahazo ny naoty tsara ny “mention”. “Ny “mention Assez Bien” ihany no ambony indrindra azon’ireo mpianatra. Notazonina rahateo ny naoty folo amin’ny roapolo name­rana ny salanisan’ireo afaka na dia efa adihevitra be aza vao vita izany. Nisy tamin’ireo mpampianatra hafa no nanolo-kevitra ho sivy faingo dimy amby fitopolo amin’ny roa­polo ny naoty farany ambany”, hoy indray ny mpa­­mpianatra taranja literera iray hafa.
Ny sokajy A1 no voalazan’ ireo mpampianatra fa namiratra indrindra tamin’ity fihodinana faharoa manokana ity. “Ny 26,10%-n’izy ireo no afaka tamin’izany. 23,41% ho an’ny sokajy D raha nahatratra 19,59% ho an’ireo avy ao amin’ny sokajy C. Ny tao amin’ny sokajy A2 kosa no ambany indrindra ny sala­nisan’ireo afaka satria 17,02% fotsiny izany”, araka ny fana­zavana voaray, teny Ankatso.
Nomarihin’ireo mpa­mpianatra kosa fa: “ ireo no vokatra notononina tao amin’ny fanapahana ny naoty farany ambany tamin’ny antoandro teo (ndrl: omaly antoandro). Tsy fantatray kosa izay mety ho fiovany. Toy izany ihany koa ny salan’isa ankapobeny ho an’ny fahafahana bakalôrea tamin’ity taona 2019 ity”.
Nanamafy ny loharanom-baovao iray avy ao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa fa “anio vao mety ho fantatra ny tena voka-panadinana ôfisialy tamin’ny fihodinana faharoa manokana”.